Izindaba - The Impact of Covid 19 on the Blow Molding Machine Market-Global Industry Report 2030
Ubhadane lwe-COVID-19 (coronavirus) selusiphindaphinde kabili isidingo sokubumba igalelo, ukupakisha okuguquguqukayo nemishini yesiphuzo. Njengoba abathengi befuna izidingo ezifana nensipho, isibulala-magciwane neminye imikhiqizo yokuhlanza, isidingo semishini ehlukahlukene yokubumba igalelo njengokujola nokunwebeka ngomjovo sesikhuphukile. Isidingo esingakaze sibonwe semikhiqizo yokuhlanza nokubulala amagciwane kudale amathuba ezinkampani ezimakethe zomshini wokubumba igalelo ukuze zibambe inani. Njengoba abantu bachitha isikhathi sabo esiningi bodwa, isidingo seziphuzo ezifana nejusi, amanzi nobhiya nakho kuyakhula.
Njengoba abantu beqeda ngokushesha uhlu lwabo oluyisisekelo, imishini yokubumba umjovo esetshenziselwa ukukhiqiza amabhokisi nayo izodingeka kakhulu. ISidel, umkhiqizi wezinqubo zokubumba ezelulwa kalula, uguqule isikhungo sayo somhlaba wonke sokusebenza kahle saba yindawo yokukhiqiza yamabhodlela ezandla e-PET (polyethylene terephthalate). Ngakho-ke, imakethe yomshini wokubumba ulindelekile ukuthi ibone ukukhula okuphawulekayo phakathi nesikhathi sokubikezela.
Ukuqamba emishinini yokubumba evulekile sekuya ngokuya kwanda. Le mishini idonse ukunaka kwabatshalizimali ngoba lezi zinhlelo ziyakwazi ukukhiqiza amabhodlela asezingeni eliphakeme ezicelo zokupheka, zokupakisha nezokuthutha. Imakethe yomshini wokubumba okulindelwe kulindeleke ukuthi ivuthwe ngokuthuthuka kokunemba kwesistimu nejubane, futhi izofinyelela inani lamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-65.1 ngonyaka ka-2030. Abakhiqizi bePlastiki bakhetha ukuguquguquka nokuphindeka kwemishini yokubumba eyelulwa. Ubuchwepheshe bokuguqula umshini budala amathuba amaningi ezinkampani ezimbonini zezimoto, iziphuzo, ezempilo nezimboni zezimonyo.
Emakethe yomshini wokubumba umshini, into enkulu kakhulu ye-cavitation ihehe imizwa yabatshalizimali. Inkampani yaseCanada ekhiqiza imishini iPet All Manufacturing Inc. ithuthukisa ngokunenzuzo imishini yokubumba esheshayo yokuqinisekisa ukushintsha kwesikhunta ngokushesha ngaphandle kwesidingo samathuluzi. Ngakho-ke, abakhiqizi bepulasitiki babonile ukusebenza ngempumelelo kwezindleko nokushesha kwejubane kwemishini yokubumba okuthuthukile okuthuthukile.
Imishini yokubumba i-Blow yenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zezicelo zesiphuzo nezingezona iziphuzo. Kodwa-ke, kubakhiqizi bepulasitiki, ukugcina ukungaguquguquki komoya ocindezelweyo kungaba yinselele. Ngakho-ke, izinkampani ezimakethe zomshini wokubumba umshini zengeza izinhlelo eziphansi neziphezulu ezingathinti ezinye izinqubo. Njengoba izicelo zokubumba ze-PET zikhula ngokushesha, abakhiqizi bakhulisa amandla abo e-R & D ukuthuthukisa imishini yokubumba ephambili.
Izinkampani ezimakethe yomshini wokubumba igalelo zakha izinhlelo ezikulungele ukucindezelwa komoya okucindezelweyo, okuqinisekisa ukuthi umoya ubuyiselwa emuva ohlelweni lokucindezela okuphansi lwesitshalo. Amathangi wesitoreji somoya wendawo kanye nezinto ezifanele zomoya ezilinganiselwe zingasiza ekunciphiseni ukwehla kwengcindezi kuzicelo zokubumba ze-PET. Umenzi wemishini kufanele abonisane nochwepheshe ukukhomba nokukala ukwehla kwengcindezi emshinini wokubumba igalelo.
Hambisana neminye imikhiqizo? Cela umbiko owenziwe ngokwezifiso emakethe yomshini wokubumba umshini
Imakethe yomshini wokubumba igalelo yenza izinguquko, yethula ubuchwepheshe obusha bokuqhuma amagwebu obusha futhi obonga. Isibonelo, umhlinzeki wesixazululo se-blow molding technology W.MÜLLER GmbH uzibophezele ekuphumeleleni ngokuphumelelayo iziqukathi zesikhunta se-blow technology nobuchwepheshe bayo bezingqimba ezintathu. Isendlalelo sokumboza esincane esihlanganiswe nomgogodla we-foam siqinisekisa ukuqina okuphezulu kwesitsha futhi sisiza ukunciphisa isisindo saso.
Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokubumba ubuchwepheshe buqeda isidingo samakhemikhali ashaya amakhemikhali. Kumakhemikhali ashaya amakhemikhali, ungqimba oluphakathi lwesitsha lufakwa i-nitrogen ngenqubo ebonakalayo. Lobu buchwepheshe buyindlela enhle yezinkampani ezisemakethe yemishini yokubumba igalelo, ngoba lobu buchwepheshe obunobungani bemvelo buhambisana nemithetho yamanje yokupakisha ukudla. Amabhodlela amagwebu adinga umjikelezo omncane nesikhathi sokushaya, okusiza ukuqinisekisa ubuqiniso bezomnotho bemishini.
Yonke imishini yokubumba igalelo kagesi idala amathuba ebhizinisi enkampanini. I-Parker Plastic Machinery Co., Ltd.iyinkampani esebenza ngobuchule yezisombululo ze-turnkey zemishini yokubumba igiya eTaiwan. Ithuthukisa imishini yayo yokubumba ugesi emakethe futhi iyathandwa ngohlelo lwayo lokonga amandla kagesi. Uma kuqhathaniswa nemishini yokunyathelisa yendabuko, izinkampani ezisemakethe yomshini wokubumba zandisa umthamo wazo wokukhiqiza ukwenza amandla kagesi aphansi.
Yonke imishini yokubumba ugesi kagesi enezindleko eziphansi kakhulu zokulungisa kungukukhetha kokuqala kwabakhiqizi bepulasitiki ngoba lezi zinhlelo azibangeli ukungcola kukawoyela. Izinkampani ezisemakethe yomshini wokubumba umshini zigxila kuzinhlelo zonke zikagesi. Lezi zinhlelo ngeke zibangele ukuchitheka kukawoyela futhi zonge izindleko zokulungisa zabakhiqizi bepulasitiki.
Ukuthunyelwa kwemishini emisha ekubunjweni kwemishini yokubumba kudinga isipiliyoni seminyaka yobunjiniyela. Umkhiqizi weTech-Long Inc.-wase-Asia wemishini yokupakisha isiphuzo, enesisekelo sebhizinisi esiqinile e-United States nase-Europe, futhi uvuselela umshini wayo wokubumba igalelo, ongakhiqiza amabhodlela ayizicaba ezinsiza zokuphuza nezingasetshenziswa kweziphuzo Kanye neziqukathi ezinkulu. Izinkampani ezisemakethe yomshini wokubumba umshini zakha izinhlelo zokukhiqiza amabhodlela angalingani ngokususelwa kubuchwepheshe bokushisa obuphambili.
Ngakolunye uhlangothi, izinkampani ezikumakethe yomshini wokubumba igalelo zithuthukisa ikhono lazo lokukhiqiza izinhlelo ze-hybrid. Basebenza kakhulu emishinini ekwazi ukuhlangabezana nezidingo ze-polyethylene, i-polyethylene terephthalate ne-polyvinyl chloride materials. Abenzi bezinto zokusebenza bahlola amathuba amaningi ngokwakha amasistimu akhiqiza amathangi kawoyela, iziqukathi zikawoyela ezidliwayo, amathoyizi neziqukathi zasendlini.
Isidingo esingakaze sibonwe semithi yokubulala amagciwane kanye nemikhiqizo yokuhlanza kuye kwaholela ekwamukelweni kwemishini yokubumba igalelo yokwenza insipho yezandla, izibulala-magciwane nama-hydrogel. Zonke-kagesi igalelo ekubumbeni izinhlelo ziya ngokuya zithandwa kakhulu emakethe. Ngesikhathi sesibikezelo, imakethe yomshini wokubumba igalelo kulindeleke ukuthi ikhule ngesilinganiso sokukhula sonyaka esihlanganisiwe esingaba ngu-4%. Ngakho-ke, ukwanda okungalindelekile kobuchwepheshe bokubumba i-extrusion obubizwa nge-die extension sekuyisithiyo ekukhiqizeni kwepulasitiki. Ngakho-ke, izinkampani kufanele zamukele ukuphambuka okukhulu kusuka kubukhulu bomkhiqizo noma ukubekezelelana ukugwema izinkinga zokunwebeka kwesikhunta. Izici ezingabizi kakhulu zobuchwepheshe be-extrusion molding zenze ukuthi kube nesidingo semishini yokubumba amagalelo.
Imibiko eminingi yemikhuba evela ku-Transparent Market Research - https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/stellar-22-cagr-set-to-propel-transparent-ceramics-market-forward-from-2019-to - 2027-tmr-804840555.html
Ukulinganiselwa kokucubungula kwemishini yokubumba igalelo kanye nokuba khona kwezinye izindlela kuvimbela ukukhula kwemakethe yomshini wokubumba
Ukungena kweMakethe nokuthuthukiswa komkhiqizo kunikeza amathuba emakethe yomshini wokubumba igalelo
Isicelo sokuhlaziywa komthelela we-covid19 - https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=65039